Andro: 6 Febroary 2019
Sahin manana tetikasa Metro
Ny ben'ny tanànan'i Gaziantep Metropolitan Fatma Sahin, fifidianana 31 martsa teo no nilaza fa hanao izany raha voafidy. Declaredahin dia nanambara ny fanambaran'ny fifidianana ary nilaza, etmek To hanohy ny hanaovana an'i Antep ho tanàna izay mifanentana amin'ny razanay sy ny martiora anay. [More ...]
Fikarakarana ny tetikasa fampiharana ny fifandraisana amin'i Ankara İzmir YHT Line ho any Afyon Station
Fanomanana tetikasa fampiharana ho an'ny fifandraisana fifandraisana Ankara İzmir YHT mankany amin'ny Station Afyon. Ny serasera isam-paritra momba ny fividianana sy ny fanaraha-maso ny asa [More ...]
RayHaber Tsy misy anglisy intsony!
RayHaberVoalohany ao Tiorka: vavahadin'ny vaovaon'ny Internet amin'ny sehatry ny Internet RayHaber 9. mankalaza ny taona misoratra anarana politika hafa amin'ny alàlan'ny fampitodihana ny vaovao 65 arivo amin'ny teny anglisy ho tranokalon'ny mpamaky antsika [More ...]
Ny Fivoriambe momba ny fandraharahana dia natao tao DHMİ
Ny fivoriana ho fampivoarana ny fiaraha-miasa eo amin'ireo andrim-panjakana miaraka amin'ny fandraisana anjaran'ny tompon'andraikitra amin'ny orinasam-panjakana dia natao tao amin'ny Ivotoerana Kongresy DHM DH. Betsaka ny mpandraharaha momba ny orinasam-bahoaka no nanatrika ny fivoriana. Tale jeneralin'ny vaovaon'ny Electricity Generation Inc. (EÜAŞ) sy ny Orinasam-panjakana Tiorka [More ...]
HalkalıNy Rail Rail ho fananganana antoko manan-danja ao amin'ny tambajotra mampifandray an'i Eoropa amin'i Azia
Fitaterana sy ny Fotodrafitrasa Minisitra M. Cahit Turhan, "Torkia sy ny Vondrona Eoropeana (EU) tao amin'ny fametrahana ny fampandehanana ny rafitra fitaterana eo amin'ny mahaliana ny roa tonta haingana sy soa aman-tsara. Androany fiaraha-miasa [More ...]
Mialà amin'ny SAMULAŞ avy amin'ny Coşkun Öncel
Samsun Metropolitan Sekretera jeneralin'ny monisipaly sy Samulaş A.Ş. Ny filoha lefitry ny Birao mpitantana Coşkun Öncel dia nanao veloma farany tamin'ny mpiasan'ny Samulaş. [More ...]
Fampiofanana ho an'ny mpampiofana mpianatra any TÜVASAŞ
Ho an'ny oniversite, mpianatra amin'ny Sekoly ambony sy ny sekoly ambaratonga ambony izay manatanteraka fiofanana amin'ny fahaiza-miasa amin'ny atiny TŞVASAŞ General Directorate; Ireo mpampiofana izay ao anatin'ny Departemantan'ny Departemantan'ny Fampianaram-pianakaviana sy ny Sôsialy; Tekinika fifandraisana, fitantanana stress, [More ...]
Fandefasana fiarandalamby alemana 23 Fandefasana entana avy any Talgo amin'ny Transc
Fiaran-dalamby Alemana dia nanome baiko ny 23 Piece Train avy ao Talgo ho an'ny Intercity fitaterana: ny 5 an'ny alàlan'ny Railway dia nanambara ny fifanarahana miaraka amin'ny Espaniola Talgo ho an'ny lamasinina 23 ho an'ny fitaterana fifaneraserana. [More ...]
Ny Alstom's Electric Transport Solution APTIS dia ao anatin'ny fizotry ny fisedrana any Espana
Alstom dia manolotra an'i Aptis, traikefa vaovao amin'ny fivezivezena mandritra ny enina herinandro any Espana. Aptis dia hosedraina miaraka amin'ireo orinasam-pitaterana ao an-toerana any Barcelona, ​​Madrid ary Vigo. Fanadinana voalohany amin'ny volana Janoary [More ...]
Fandefasana taratra ara-barotra eo an-toerana avy ao Kabysl Prysmian
Angovo sy ny fifandraisan-davitra telegrama mpitarika orinasa maneran-tany ny asa Prysmian Group ao Torkia ao amin'ny Tiorka Prysmian Cable, lalamby tonga hatrany amin'ny vahaolana natolotra ho an'ny rafitra. Türk Prysmian Kablo dia nanomboka namokatra tao amin'ny 1990 [More ...]
Ny Sekapark-Plajyolu Tram Line ny daty fanokafana dia efa voafaritra
1 Aogositra 2017 dia nanompo ny vahoaka tao Kocaeli. tratra ny lampihazo. Ny drive test dia 2. Rehefa naiditra am-panaovana fanompoana ny sehatra dia lasa mazava. 2 tamin'ny febroary [More ...]
Aza manakimpy ny fanalahidy!
Kocaeli Metropolitan Municipio 24 jona 2018 fifidianana, na dia mbola tsy vita aza ny malemy, dia ny lohahevitry ny foibem-paritra Gebze-Darica no ivon'ny adihevitra. Ny kaominina dia mitovy amin'ny lakandranon'i Izmit-Alikahya, izay mbola tsy namboarina. [More ...]
TS Kay-Sür-Face "fandaminana avy amin'ny ATSO
Antalya Beyaz Kay-Sür-Yüz ”Fikambanana Fanatanjahantena Ririnina izay nokarakarain'ny Antalya Chamber of Commerce and Industry (ATSO) dia hotanterahina amin'ny volana febroary izao. Antalya "Kay-Sür-Yüz" Organisation Fanatanjahantena Ririnina manomboka amin'ny White ka Blue nokarakarain'ny Antalya Tranombarotra sy Indostria Antalya [More ...]
Fiarandalamby natiora fantatra tany amin'ny fanjakana alemà enina
Alstom's Coradia iLint dia mitsangantsangana any Alemaina manomboka amin'ny faran'ny volana Janoary ka hatramin'ny tapaky ny volana Febroary 2019. Ny lamasinin-tsolika mpiorina sôkômbra no voalohany amin'ny karazana eto amin'izao tontolo izao. Alstom dia mampiasa teknolojia hidrogen efa voaomana tsara amin'ny fanjakana federaly enina ary [More ...]
Alanya Traffic Training Park 2. Term began
Miaraka amin'ny fisokafan'ny sekoly any Alanya Municipal Traffic Park, nanomboka ny fampianarana ny semester faharoa. Tamin'ny semester voalohany amin'ny 2018-2019, Alanya Municipality Traffic Training Training izay manome fampianarana ny fifamoivoizana amin'ny olona 20.940 amin'ny semester faharoa [More ...]
Ny New Hydrogen Trains dia afaka mamarana fiarandalamboarana fiara
Nofoanana ny tetik'asa fiaran-dalamby lehibe rehefa nofoanan'ny governemanta UK ny fikasana hanomezana herinaratra any Wales, Midlands ary avaratr'i Angletera ary nisintona ny tamba-jotra lehibe Western. Navoaka vaovao [More ...]
Ny Architecture Yanardağ dia nandresy ny fifaninanana tetikasa ara-panatanjahantena iraisam-pirenena
Yanardağ Architecture, miasa any Bolu, dia nikarakara ny fifaninanana iraisam-pirenena momba ny Architectural Project momba ny fampiasa indray amin'ny lalamby italiana voalohany, Station Station Bayard, amin'ny anarana hoe "NapoliCall: Centre service vaovao ho an'ny Railway italiana voalohany". [More ...]
Gebze-Halkalı Ny daty fanokafana ny andalana metatra dia voafaritra
Binali Yıldırım, Filohan'ny Antenimieram-Pirenena Lehibe ao Tiorkia sy ny ben'ny tanànan'ny AK Party Istanbul Metropolitan, dia efa niandry an'ireo mponina an-tapitrisa ao Istambul nandritra ny taona maro.Halkalı nanambara fa hanomboka amin'ny sidina amin'ny sisin-tany ambanivohitra ny sidina commuter. Yildirim, "Ny Ministera no hanapa-kevitra fa [More ...]
Misiônera Cable amin'ny alàlan'ny fiarandalamby
Ny Eskişehir Metropolitan Municipale 71 Houses-City Hopitaly-75.Yıl dia manohy miasa haingana eo anelanelan'ny olona tsy fantatra amin'ny alàlan'ny fametrahana tariby fampitana angovo, ampahany amin'ny tariby no nangalatra. Manomboka manome hery ireo andalana [More ...]
Fikirakonana fifamoivoizana vokatry ny asam-bahinin'ny Eskişehir
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kentte sürmekte olan tramvay hattı uzatma çalışmaları kapsamında bir kavşağın trafiğe kapatılacağını duyurdu. Sivrihisar 2 Caddesi ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nı birbirine bağlayan kavşak 07 Şubat 2019 Perşembe [More ...]